MACLUUMAAD LA'AANTA: Martin Vrijland
Halista nukliyeerka ee Waqooyiga Kuuriya oo ka soo horjeeda khatarta ugu weyn ee aadanaha
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	on 11 May 2017	• 29 Comments
Toddobaadyadii la soo dhaafay, warar dheeraad ah oo ku saabsan doorashooyinka Faransiiska ayaa diiradda saaray hanjabaadaha dagaalka Mareykanka ee ka dhanka ah Waqooyiga Kuuriya. Waddankaa ayaa si lama filaan ah halis u ah, sababtoo ah waxay ku lug lahaan lahayd horumarinta hubka nukliyeerka, taasi waa dabcan aan loo baahnayn haddii laguu yiraahdo America, laakiin waa alibi wacan [...]
Uma baahnid inaad ka soo hor jeeddo nidaamka, laakiin waa inaad ku guuleysataa gudaheeda
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	on 2 May 2016	• 1 Comment
Dad badan ayaa u maleynaya inaanad ka soo hor jeedin "nidaamka", laakiin waa inay helaan siyaabo lagu guuleysto. Waxaad awoodi kartaa, sidii ay ahaan lahayd, inaad u hesho habab aad ku kasbato lacag ama nidaamkan nidaamka hadda jira. Inkasta oo ay tahay xaqiiqda ah in markaad riixdo gogoshiisa xiisadda, tan [...]
Maxay khaldan tahay fikradda dawlad dhexe ee adduunka?
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	on 16 Maarso 2016	• 16 Comments
Su'aasha aan inta badan helayo waa: "Maxay khalad tahay dawlad dhexe ee adduunka?" Mararka qaar wax kale ayaa lagu daraa: "Waxaa jira dad badan oo fudud oo u baahan hanuunin isla markaana weli waa waxtar leh haddii aad dunida ku haysato waxay leeyihiin sharciyo isku mid ah "Su'aalo asal ah oo suurtagal ah, waxaad dhihi kartaa. [...]
Nano-tech-ka cuntooyinka synthetic iyo raadinta Google ee dhimashada
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	on 27 Febraayo 2016	• 12 Comments
Google ayaa shaqaalaysiisay hiddesidii ugu saraysay ee raadinteeda dhimashada. Google waxay gabi ahaanba ku jirtaa "khariidada waddada" sida badanaa lagu sharxi karaa "Transhumanist Ray Kurzweil" oo soo bandhigay ereyga 'singularity' iyo sheegashooyinka ah in bini'aadanimada 2045 ay gaarsiiso dhimashadooda. Horaantii waxaan soo sheegnay in ay ogaadeen in lambarka DNA-da dib loo bilaabi karo [...]
"Tijaabada labajibbaaran" ee ku saabsan shucuurta dhabta ah
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	on 24 Febraayo 2016	• 20 Comments
Wax walba oo kugu wareegsan, xitaa jirkaaga, ayaa la abuuray oo kaliya markaad u aragto. Taasi waa hadal cad. Si kastaba ha ahaatee, bayaankaan waxaa taageera cilmi-baaris cilmiyeed oo ku saabsan baaxadda fanka. Qaybaha jidhka ee Quantum ee adduunka ayaa soo noqnoqonaya boqolaal jeer, sababtoo ah waxay keeneen rumaysad aad u tiro badan oo isla wakhtigaas oo kale ah sida cajiib ah. [...]
Miisaankani waa mid aan muhiim ahayn, wax walba waxay ku dhacaan 'maskaxda'
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	on 22 July 2015	• 8 Comments
'Matrix waa wax aan muhiim ahayn, wax walba ayaa maskaxda ka dhacaya', waa hadal aan todobaadkan maqlay waxaana hubaa inay qiimo leedahay. Ka sheekeynaya qiyaasta iyo qaabka ay ka kooban tahay gabi ahaanba lama hurin; fekerka ku saabsan qaabka awoodda ee dhulka waa mid aan muhiim ahayn; Wax kasta oo ka mid ah waayo-aragnimada ayaa ka dhacda [...]
Isdhexgalka dadka iyo asalkiisa
Inkastoo dadka ku salaysan oo aan sharaxaad of physics galmada iyo "Double jeex jeexi tijaabi" (halkan ka eeg), gunaanaday waxaa laga yaabaa in aan aragti deterministic nolosha, halkaas oo wax walba waa uun qiyaas iyo nin keliya waa inay awoodaan inay "Xaqiiqo ahaan" sida xaqiiqda ah "oo ah nooca hologram ee mashruuca, waa in [...]
Ruuxa, nafta iyo jidhka: waa maxay taasi waa maxay shaqadooda?
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	on 23 April 2015	• 46 Comments
Diimaha intooda badan, waxaa mararka qaarkood lagu sheegaa 'ruuxa, nafta iyo jirka'. Sidaa darteed dadka intooda badani way maqleen ereyadaas, laakiin waxaa laga yaabaa in ay adag tahay in la qeexo labada koowaad, halka aynu wada ognahay waxa jidhku yahay. Aniga qudhaydu waxaan ku sharaxay jirkeena sida bio-computer iyo [...]
Wax kastoo qorraxda hoosta ku jira waa isbedel
Filed in NEW INSIGHTS	by Martin Vrijland	on 16 April 2015	• 9 Comments
'Wax kastoo qorraxda hoosta ka jiraa waa isbedel'; waa waxa muusikada Pink Floyd ku heesaya gabayadooda 'Eclipse'. Wax kastoo qorraxda ka hooseysa waa 'isbeddel'. Maxay taasi micnaheedu noqon laheyd? Anigu waxaan u qoray maqaal ka hor (eeg halkaan), laakiin waxaa loo waxyooday maanta in ay ku soo noqoto. [...]
Sidee ayaad uga jooji kartaa shaxanka iyo weli ka badbaado gudaha?
In September 2014 waxaan helay - in aanleidling of articles ku furta - dhowr jeer su'aal meesha ay ku qoran in nuxurka: "Sidee baan ka furta oo naftayda ka saar iyo weli waxaan ku noolaan karaa in furta" Tusaale ahaan waxaa jiray qof soo socda Su'aalaha la waydiiyay [quote] Waxaan xiiseynayay muddo [...]
Guud ahaan Wadarta: 1.352.324